Kindle Oasis VS Kindle Voyage, iwo maviri akanakisa maReaders pamusika vakatarisana | MaReaders ese
Kindle Oasis VS Kindle Voyage, iwo maviri akanakisa maReaders pamusika vakatarisana
Villamandos | | Amazon Kindle, vaverengi
Nezuro chete Amazon zvakaratidza zviri nyowani Kindle Oasis e-kuverenga ne ...Kindle Oasis»/], iyo nyowani yekumusoro-kumagumo eReader iyo inomira kunze kune yayo yakavandudzwa dhizaini, zvine chekuita neyakatangira, iyo Kindle Voyage e-kuverenga, ...Kindle Voyage»/] Uye yekuchengeta isina kugadzikana maficha aipiwa neakamberi Kindle, yaive flagship yekambani inotungamirwa naJeff Bezos. Mushure mekuiongorora nezuro, mushure mekukwanisa kuyiyedza kwemaminetsi mashoma pachiitiko chakatikoka kuAmazon Spain, nhasi hatigone kupotsa mukana wekutarisana nayo neyakaitangira uyezve kuenzanisa neiyo Kindle Paperwhite -...Kindle Paperwhite »/], iyo yatingati ihama yake diki.
Nhasi uye kuburikidza nechinyorwa ichi Tichafananidza iyo nyowani Kindle Oasis nerwendo rweMhando mune zvakadzama ruzivo, Pasina kukanganwa sezvatakataura nezve iyo Kindle Paperwhite. Pamwe misiyano haina kuwanda, asi yakakosha uye kunyangwe pakutanga pakuona inoita kunge matatu madhizaina kumashure kumashure iwo akatosiyana, kutanga nemagadzirirwo awo uye kupera nemutengo wawo.
Kana iwe uchida kuziva kuti iyo nyowani Kindle Oasis, iyo Kindle Voyage uye iyo Kindle Paperwhite zvakafanana, ramba uchiverenga nokungwarira nekuti kuburikidza nechinyorwa chino iwe uchaona, kwete chete nezve izvo, asi nezve zvimwe zvakawanda zvinhu izvo zvatinotenda zvinogona kuve zvako .inonakidza chaizvo kana iwe uri kufunga, semuenzaniso, yekutenga eReader nyowani, kupinda munyika yekuverenga kwedhijitari kana kushandura chishandiso chauinacho parizvino.
Tisati taenzanisa skrini yayo, mutengo wayo kana mabhenefiti ayo muzvinhu zvakasiyana, tichaita ongororo yakakwana yehunhu hwayo uye maratidziro, kuitira kuti isu tese tizviwanire uye tizive zvakajeka izvo imwe neimwe yeMhando iyi inotipa.
1 Kindle Voyage Zvimiro uye Magadzirirwo
2 Kindle Oasis Zvimiro uye Magadzirirwo
3 Kindle Paperwhite Zvimiro uye Magadzirirwo
4 Dhizaini; nhanho imwe kumashure kuti urambe uchivandudza
5 Screen; usazvitsvage nekuti hapana misiyano
6 Iyo nyowani Kindle Oasis kesi, inodikanwa uye yakakwana seyakavanzika?
7 Mutengo; musiyano mukuru
8 Kidle Oasis, anokunda duel iyi pasina nharo dzakawandisa
Kindle Voyage Zvimiro uye Magadzirirwo
Screen: inosanganisira 6-inch skrini ine tsamba e-papper tekinoroji, kubata, ine resolution ye1440 x 1080 uye 300 pixels pa inch.
Zviyero: 162 x 115 x 76 mm
Yakagadzirwa nemagnesium nhema
Kurema: WiFi vhezheni 180 gramu uye 188 magiramu iyo WiFi + 3G vhezheni
Yemukati ndangariro: 4 GB iyo inobvumidza iwe kuti uchengete anopfuura ma2.000 eBooks, kunyangwe zvichizoenderana nesaizi yebhuku rega rega
Kubatana: WiFi uye 3G kubatana kana chete WiFi
Mafomu akatsigirwa: Kindle Fomati 8 (AZW3), Kindle (AZW), TXT, PDF, MOBI isina kudzivirirwa nePRC mune yavo yekutanga fomati; HTML, DOC, DOCX, JPEG, GIF, PNG, BMP nekutendeuka
Yakakwirira skrini musiyano iyo ichatibvumidza isu kuverenga mune yakasununguka uye inonakidza nzira
Kindle Voyage e-kuverenga, ...
Inotyisa 300 dpi yakakwira resolution yekuratidzira - inoverengwa kunge bepa, isina kupenya, kunyangwe muzuva rakajeka.
Kuzvidzora-mwenje wemwenje iyo inopa iyo chaiyo nhanho yekupenya masikati neusiku; verenga zvakanaka kwemaawa.
Iyo Peji Turn chinhu inokutendera iwe kuti uchinje mapeji pasina kusimudza munwe.
Verenga zvakanyanya sezvaunoda. Pakubhadharisa kamwe, bhatiri rinogara kwemavhiki, kwete maawa.
Yakakura katarogu yeema-eBooks pamitengo yakaderera: anopfuura ma100 eBooks muSpanish nemutengo uri pasi pe € 000.
Kindle Oasis Zvimiro uye Magadzirirwo
Ratidza: inosanganisira 6-inch touchscreen ine Paperwhite tekinoroji ine E Ink Carta ™ uye yakavhenekerwa kuverenga mwenje, 300 dpi, optimized font tekinoroji, uye 16 grey zviyero
Zviyero: 143 x 122 x 3.4-8.5 mm
Yakagadzirwa pane yepurasitiki dzimba, ine polymer furemu iyo yakaiswa pasi peiyo galvanization maitiro
Kurema: Wifi vhezheni 131/128 gramu uye 1133/240 gramu iyo WiFi + 3G vhezheni (Huremu hunoratidzwa pekutanga husina chifukidziro uye chechipiri nacho chakabatanidzwa)
Mafomu akatsigirwa: Fomati 8 Kindle (AZW3), Kindle (AZW), TXT, PDF, MOBI isina kudzivirirwa, PRC natively; HTML, DOC, DOCX, JPEG, GIF, PNG, BMP nekutendeuka
Kindle Oasis e-kuverenga ne ...
Mhando yedu yakatetepa uye yakapusa; verenga zvakanaka kwemaawa.
Ergonomic bhatani dhizaini yekushingisa peji kutendeuka.
Mhando ine kuzvitonga kuzere. Iyo yeganda kesi nebhatiri rakabatanidzwa rinogona kuwedzera hupenyu hwebhatiri rwechigadzirwa nemwedzi yakati wandei.
Sarudza ruvara rwechivharo chinobviswa: dema, burgundy kana walnut.
300 dpi yakakwira resolution yekuratidzira - inoverengwa kunge akadhindwa mapepa.
Kindle Paperwhite Zvimiro uye Magadzirirwo
Ratidza: inosanganisira 6-inch skrini ine Tsamba e-pepa tekinoroji uye yakavhenekerwa kuverenga mwenje, 300 dpi, optimized font tekinoroji uye 16 grey zviyero
Zviyero: 169 x 117 x 9.1 mm
Kurema: WiFi vhezheni 205 gramu uye 217 magiramu iyo WiFi + 3G vhezheni
Bhatiri: Amazon inovimbisa kuti neyechinhu chimwe chete chichaja tinogona kunakidzwa nekuverenga kwemavhiki matanhatu
Yakavakwa-mukati-yega-inodzora mwenje: inoverenga masikati neusiku.
Nakidzwa nechido chako chekuverenga pasina email yambiro kana kuzivisa.
Dhizaini; nhanho imwe kumashure kuti urambe uchivandudza
Nekusvika pamusika gore rapfuura rerwendo rweMhando, Amazon yaida kutipa chishandiso chine simba rakakura, kutaurwa kunonakidza, asi pamusoro pezvose nePrimiyamu dhizaini uye izere nehunyanzvi. Yakagadzirwa nemhando yepamusoro zvigadzirwa, kungoibata muruoko rwako unogona kuona kuti iwe wanga usiri pamberi pechinhu chero chipi zvacho.
Zvisinei, Nekusvika kweA Kindle Oasis pamusika, kambani inotungamirwa naJeff Bezos inoita kunge yasarudza kutora nhanho kumashure, kuti ifambe mune imwe nzira., izvo zviri pachena kuti zvinonakidza. Mune iyi nyowani nyowani, yemhando yepamusoro epurasitiki iri zvakare zvakare protagonist huru, kuti tigone kutipa mudziyo une zvidiki zvidimbu uye pamusoro pezvose zvine huremu hwakadzika kwazvo.
Uye zvakare, ipurasitiki iyo ino nyowani nyowani yakavakwa haina kutipa isu yakaipa manzwiro uye kudzikiswa kwehuremu kunofarirwa kwazvo. Sezvawakatoona, isu tabva pa188 gramu iyo iyo Kindle Voyage inorema kusvika kungori 131 gramu iyo iyo New Kindle Oasis inorema.
Kubatanidzwa kwenyaya, nebhatiri rakavakirwa, ndeimwe yemasimba eiyo Kindle Oasis, umo zvigadzirwa zvemhando yepamusoro izvo zvakashandiswa muRwendo rweMhando hazvina kushandiswa, asi izvo zvakatsiviwa kutipa zvimwe zvinhu zvakawanda, kune zvinonyanya kufadza, kana zvirinani tinofunga kudaro.
Sekureva kwekugadzirwa, tinogona kutaura izvozvo iyo Kindle Paperwhite inokanda nhanho imwe kuseri kweYese Kindle Oasis uye iyo Kindle Voyage, kunyangwe rombo rakanaka kuti vaverengi vazhinji havana hanya nekunze dhizaini yechigadzirwa uye izvo zvinonyanya kukosha hunhu hwahunovapa mukati.
Screen; usazvitsvage nekuti hapana misiyano
Dai isu taizoisa iwo matatu Mhando patafura uye tomuvhenekera, pachiratidziri chayo tinogona kuwana zvakawanda zvakafanana uye misiyano mishoma. Uye ndezvekuti iwo ma skrini eese ma Kindle Oasis, iyo Kindle Voyage uye iyo Kindle Paperwhite iwo akaenzana saizi, shandisa tekinoroji imwechete uye zvakare iine resolution imwechete yemapikiseli padiki.
Imwe yemisiyano mishoma yatiri kuzowana pamwe ndiko kupenya uye ndeyekuti Kindle Oasis yasvika pamusika ichizvirumbidza nekutipa kupenya kukuru, kunyangwe mune mashoma mamiriro ezvinhu. Izvi zvinosiyanisa zvakanyanya zvinorasikirwa nekukosha kwazvo tichiziva kuti iwo matatu madhijitari akabatanidza mwenje iyo inotibvumidza isu kuverenga, pasina chero kunetseka uye tisingasiye maziso edu mukuyedza, mune mamiriro erima rakazara.
Pasina mubvunzo, iyo skrini haisi kuzove imwe yemisiyano inoita kuti titenderedze pakutenga imwe kana chimwe chigadzirwa uye izvo ndezvekuti ese matatu akafanana uye anosiyana mune zvidiki zvidiki pasina zvakanyanya kukosha.
Iyo nyowani Kindle Oasis kesi, inodikanwa uye yakakwana seyakavanzika?
Kwemazuva zvakange zvataurwa nerunyerekupe mukana wekuti iyo nyowani nyowani inosanganisira iyo kesi uko rekunze bhatiri ndiyo huru protagonist. Iyi kesi tinogona kutaura kuti ndeimwe yemisiyano mikuru yeiyo nyowani Kindle Oasis zvine chekuita neiyo Kindloe Voyage uye zvakaenzana nekuremekedza chero eReader ine chisimbiso cheAmazon.
Zvichienderana nezvinodiwa nemushandisi wega wega, inogona kuve chikomborero chaicho, kunyangwe ini ndichitya kwazvo kuti vashoma vashandisi vanozoishandisa uye ndiko kuti bhatiri reReader ratotipa kuzvitonga kuzere uye ndinotenda kuti hazvina basa izvi Nyowani nyowani, kana kukwana kuti uve musiyano mukuru zvine chekuita neakautangira.
Uye zvakare, isu hatifanire kukanganwa kuti iyi nyowani nyowani inotipa nekukurumidza kuchaja, iyo inobvumidza bhatiri remuchina kubhadhariswa munzvimbo pfupi kwazvo yenguva. Pane chero munhu anonzwisisika muReader kune kesi ine bhatiri rakavakirwa?.
Mutengo; musiyano mukuru
El Kindle Voyage Yakasvika pamusika nemutengo wakashamisa anopfuura mumwe, nekuti vazhinji vedu tanga tine maReaders semidziyo ine mutengo unenge wakasarudzika uye usingawanikwe nemushandisi chero upi zvake. Amazon yakazvipembedza ichiti isu takatarisana nebhuku remagetsi remhando yepamusoro, rakagadzirwa nezvinhu zvePrimiyamu uye kuti rakatipa maficha uye mashandiro atisingakwanise kuva nawo mune chimwe chigadzirwa cherudzi urwu. Pari zvino Ichi chishandiso chinogona kutengwa ne189.99 euros.
Iyo kambani inotungamirwa naJeff Bezos yakaramba ichichengeta mune yayo katarogu zvese zviri zviviri Basic Kindle uye iyo Kindle Paperwhite, iyo inogona kutengwa kwema 79.99 euros uye 129.99 euros zvichiteerana.
Kuvhurwa kweRudzi Rwenzendo hakuna kuenda zvakaipa kuchitoro chikuru chepamhepo uye kunyangwe paine matambudziko ekutanga emasheya, kutengesa kwakakurumidza kuita nhamba dzakanaka. Iyo Kindle Oasis Zvaireva kuenda nhanho imwe kumberi uye ndiko kuti mutengo wayo uchiri wakakwirira kupfuura iwo weMhando yeRwendo, pasina, sezvataona, tipei zvakawanda zvakavanzika. Parizvino mudziyo uyu inogona kutengwa mumusika we289.99 euros, mutengo wakanyatsorambidzwa wehuwandu hukuru hwevashandisi vasina kana kufunga nezve mukana wekushandisa ihwo huwandu hwemari pabhuku remagetsi, iro ravanogona kungoshandisa kunakidzwa nekuverenga kwedhijitari.
Musiyano wemutengo pakati pemidziyo mitatu wakakosha uye nhasi zvakaoma kuwana vashandisi vakawandisa avo vanoda kuisa mari ingangoita mazana matatu euros muReader. Ehezve, tichidaro isu tichava neMhando ine yekutanga dhizaini uye ine inonakidza maficha uye maratidziro.
Kana isu tichida kushandisa mari shoma, kune iyo 129.99 euros iyo iyo Kindle Paperwhite yakakosha isu tichava neMhando yakanaka kwazvo iyo ichatibvumidza kunakidzwa nekuverenga kwedhijitari, iyo mushure mezvose chiri chinangwa nekutenga kweReader. Tinogona kutaura kuti dhizaini iri yechipiri.
Musiyano mumutengo wakakwira; Izvo zvakanyanya maererano nekugadzirwa uye kuita sekufanirwa kubhadhara iwo musiyano?.
Kidle Oasis, anokunda duel iyi pasina nharo dzakawandisa
Ichokwadi kuti Amazon yakwanisa kuita iyo Kindle Oasis ine huremu hwakadzikira uye dhizaini yakagadziridzwa, ichibatanidza nyaya nyowani inotipa imwe bhatiri, asi ndipo patinogona kutaura kuti nhau dzasvika. Dai iyo Kindle Voyage yaive vhezheni 1.0 yechigadzirwa, iyi Kindle Oasis ndinofunga inogona kuve 1.2 isina matambudziko, apo isu tese taitarisira kuti ive 2.0 ine nhau dzakakosha.
Iyo nyowani Kindle Oasis ndiyo inokunda iyi duel kusvika kumatatu, kunyangwe isina nharo dzakawandisa uye nemutengo wakawedzera pasina chimwe chinhu uye hapana chakaderera pane zana euros uchienzaniswa neRudzi Rwendo. Isu tese takatarisira zvimwe zvakawanda kubva kune Nyowani nyowani uye kuti yaizobatanidza maficha nyowani uye kwete chete nyaya ine yakavakirwa-mukati bhatiri. Iyi kesi inogona kubatsira zvakanyanya mu-smartphone ine hupenyu hwebhatiri ipfupi, asi muReader iyo bhatiri rinogona kugara kwemavhiki akati wandei chokwadi handioni pfungwa kana kubatsira.
Mune duel yakasimba, uyo anokunda angave ari Kindle Oasis, sezvatakambotaura, asi kana tikatarisa pamutengo uye kunyanya tichitarisa zvatinoda muReader, pamwe zvakare anokunda angave ari Kindle Paperwhite, inonyanya yakaenzana Kindle munhoroondo nemutengo unoshamisa.
Ndiani anokunda duel pakati peiyo nyowani Kindle Oasis, iyo Kindle Voyage uye iyo Kindle Paperwhite yako?. Iwe unogona kutitaurira zvaunofunga munzvimbo yakachengeterwa makomenti pane ino positi, mune yedu foramu kana kuburikidza nechero ipi yemagariro network isu tiripo uye takagadzirira kukurukura iyi kana chero imwe nhaurwa newe.
Yakazara nzira kuchinyorwa: MaReaders ese » Hardware » vaverengi » Kindle Oasis VS Kindle Voyage, iwo maviri akanakisa maReaders pamusika vakatarisana
Zvakanaka, ndakaodzwa mwoyo, ndakamirira kwenguva yakareba kuti mugumo ududzirwe mune yakapfava shanduko, mumaonero angu haina kukwezva senge rwendo.
mutengo unoratidzika kupenga kwandiri.
hapana processor nyowani, hapana skrini yakavandudzwa, hapana inki yemuvara, nezvimwe.
Tichiri muMiddle Ages yevaverengi, pane chero kambani inoshinga kutora nhanho yakananga kuRenaissance uye Yemazuva Ano?
Iripi processor inozivikanwa yeimx7 yakavanzwa, iko iko skrini ine mavara, kunyangwe kana ikadzimwa, iko kwachajwa nesimba rezuva, ...
kukwakuka kwemhando yepamusoro kunofanirwa kubva kune imwe kambani, kwete kubva kuAmazon
nguruve dzesango akadaro
Ndinoda kuyedza iyo Oasis. Ndine chokwadi chekusununguka kubata neruoko rumwe. Panyaya iyi, ndinokorokotedza Amazon nekugadzirwa kwechigadzirwa. Ndine kusahadzika kwekusununguka kwazvinoita kudzvanya mabhatani epanyama, zvirokwazvo zviri nyore asi ini ndichagara ndichinetseka kuti sei pasina munhu akateedzera vhiri diki raive nePapyre 5.1 yekare. Handisati ndamboona chero chinhu chakasununguka kuvhura peji rakabata chishandiso neruoko rumwe.
Mutengo ndiwo wakandishungurudza. Inodhura kwazvo. Ini ndinofungidzira kuti chokwadi chekusanganisira iyovhavha ine chimwe chinhu (zvakawanda) chekuita nacho. Mubvunzo ndewokuti, nei vachiisanganisira, nekudaro vachiwedzera mutengo wechigadzirwa, pachinzvimbo chekuchipa zvakasiyana semubatsiri? Handiwanzoshandisa kesi nekuti ivo vanoita kuti chishandiso chive chakashata (kwete mune ino kesi, inoyevedza kwazvo) uye ivo vanowedzera huremu zvakanyanya saka handinzwisise pano nei Amazon yasarudza kuisanganisira. Zvikonzero zvavo zvichave nazvo.
Izvo zvakanaka kwazvo kuti butiro rinopa kuzvitonga kuzhinji asi ini ndinofunga kuti kufambira mberi kwakakwana kuchaitika zuva ravanobatanidza yavo yega kindle solar panel uye voita kuti ive yakazvimiririra nemagetsi emagetsi. Nezvishoma zvinodyiwa nevaverengi ndinofunga chimwe chinhu chinogoneka. Ini ndinofungidzira kuti kana vasina kuzviita zvinokonzerwa neimwe dhizaini kana huremu kana dambudziko remutengo. Kusaziva.
Sezvaunotaura muchinyorwa, misiyano ndeiyi: kureruka kwechigadzirwa pachako, kuzvitonga kuzhinji (nekavha), chifukidzo chakabatanidzwa, dhizaini iri nani uye mwenje uri nani. Izvo zvakakwana kururamisa mutsauko wemutengo? ndiwo mubvunzo.
Parizvino ndichiri neangu "mutana" KP2.
Nyaya yeiyo Kindle Oasis nenyaya yacho ndeyekuti zvinoita sekunge pasina bhatiri remhosva iyo auntonomy yeMhando haina kudarika mavhiki akati wandei. Uye izvi imhaka yekuti Amazon yakavimba nenyaya yekuti vazhinji varidzi veimwe yeaya maE-Readers vanogara vachitakura nenyaya.
Zvakanaka, chete pakati pevaviri vavo rwendo, nekuti ini handioni chero chaiko kuvandudzwa mune oasis. Asi kana ndichifanirwa kusarudza anokunda, kobo h2o zvinonyatso kukunda nekuwisira pasi semuverengi nekuita kwakanakisa pamusika uye kuverenga kwakanyanya uye kumisikidza firmware. Kunyangwe iine imwe dpi shoma. Kana uri mubvunzo weDPis uye kugara pa6 "akajeka anokunda ndiye kobo hd isina mubvunzo wemhando yemutengo.
Ndine Kindle 7th uye Kobo Glo HD uye ndine urombo kutaura kuti iyo Glo ishoma pakuita ichienzaniswa neyeMhando yePepaWhite iyo zvakare ine 300 dpi.
Pindura kuna Photius
Mutengo wakanyanyisa pasina kupa chero hunyanzvi hunoshamisa. Izvo "zvimwe zvakafanana" asi zvinodhura. Kuora mwoyo kwakakwana. Kufambira mberi kunofanira kuuya pamwe chete nehunhu hwezviratidzo. Iyo nyaya yekuti nyaya yechena chena kumashure uye akanyatsosiyaniswa mavara matema haina kugadziriswa inoratidza pachena kuti hapana sarudzo yakasarudzika yekuzvipira. Sezvakataurwa nemumwe munhu; Tichiri muMiddle Ages yevatungamiriri.
Zvizere bvumirana newe. Ndakagara ndichitaura kuti Eink anofanirwa kushanda pane izvo, musiyano. Chichena kumashure (iko zvino kwakavanzika neyakaunganidzwa mwenje) uye mavara matema. Ini ndinofunga vanga vachizopa matekinoroji matsva mwedzi unouya ... kuti vaone nhau dzavanoburitsa.
Uyo anokunda haasi iye rwendo kana oasis. Ndiyo chena yemapepa.
Iniwo handidi butiro racho. Kuti vanoitengesa yakaoma uye tinotaura. Nekudaro, ini handioni chero kuvandudzwa pane yangu mapepa mapepa.
Enric Renart akadaro
Hapana kana mumwe wavo ari "vakanyanya kuverenga." Kana paine chero chinhu, iwo ndiwo akanakisa Mhando, iyo "yepamusoro yeiyo renji", asi yekushandisa chete neAmazon. Hongu, ndinoziva, ini ndinogadzirisa uye ndinoshandura ... asi ... ko iyo Drm? Ini handigone kubvuma seyakafanira sarudzo "nekutadza" chimwe chinhu chiri dzidziso zvisiri pamutemo. Kusvetuka Drm hakufanirwe, a priori, kuve sarudzo. Pese pandinogona, ndinotenga ndisina Drm, kana ndaida Kindle ndaizoenda kunotsvaga mapepa kana kunyangwe iyo isina kunyanya kuvhenekerwa, nekuti matoyi maviri aya anodhura mutengo wakanyanya kwazvo nechinangwa chaanoitirwa: kuverenga Zvinoshamisa ne iyo yekutanga kana neBq Cervantes, pamitengo inonzwisisika).
Pindura Enric Renart
Jerry siegel akadaro
Ndatenda nechinyorwa chako, chakandibatsira zvakanyanya mukusarudza
Kutenga iyo 'yekare' Rwendo muna 2017?
Sezvo ini ndanga ndichifunga kutenga Nyowani nyowani, ndakarohwa neRwendo nechitarisiko chayo chidiki uye dzese ongororo dze rave yeOasis.
Ini ndinoti MINIMALIST chimiro uye handireve iyo Oasis, kubva dhizaini uye nehutsanana nzvimbo yekutarisa iyo Voyage iri minimalism mu e-kuverenga.
Zvino, hazvisi izvo chete. kubva pakuona kwetekinoroji iri kumusoro kune zvese, ine tekinoroji yakawanda kupfuura chero munhu. Bhatani reguruva nderechinyakare. Izvo zvakapfuura. Kana zviri izvo kuti vari kushanda, ivo vari, iwe unongofanirwa kupedzisa kumanikidza uye bata munwe wako uye wadzvanya kuti uvhure peji, nemhinduro inonzwisisika seApple Watch.
VANOITA BASA uye havamire kunze !!!
Ndiwo magadzirirwo aizoitwa naJonathan Ive. Mabhatani asiri kuoneka.
Uye zvinhu !!!
Sirivheri uye kabhoni mabhatani, magnesium muviri vs kwakakurudzira mapurasitiki.
Zvakanaka, nekurema. Nemabutiro hairemi zvakanyanya. Uye iyo origami, iyo ichave isingawanzo, asi inoshanda uye inopa kubata kweJapan kune iyo yese.
Iyo ergonomics mune dzidziso yakanakisa yemahombekombe zvinoenderana nemaoko aunayo, iyo Oasis inogona kutombove diki zvakanyanya kunyangwe nemhinduro inodzokororwa yakagadziriswa, asi inokumanikidza kuti ugare uchiverenga neruoko rumwe chete.
Chero zvazvingaitika ndiyo yakanakisa kukosha maererano nehurefu hwendege.
Kuti ndiitenderedze zvakanaka ndingati rwendo rwacho nderwekushandisa mubhodhi rese uye kuti iyo Oasis inogona kuipfuura pakuverenga nguva yekurara.
Pane mhinduro, tenga iyo SUV Voyage, uye iyo Oasis yekuverenga uri pamubhedha (uchingoseka).
Ndiyo mhando yakanaka here?
Rakanakisa Mhando ichave Rwendo - nemabhatani aro asingaonekwe - uye saizi uye huwandu hweOasis.
Kukona maseketi hakuise iwe pamusoro peRwendo, iko kwekumberi kwekushongedza uye rwendo rwekare.
Uye chimwezve chinhu ... iyo otomatiki mwenje mufaro uyo unofanirwa kuve uripo mune chero chishandiso chenguva yemberi.
Iwo ma10 maLED vs the 6 of the Voyage hapana mutsauko, zero kunyunyuta nezvechiedza uye zvakare yakajeka chena bepa.
PRICE, rwendo rweOrigami rwunongori- 50 euros - isingadhuri. Saka iyi haisi nyaya.
Oasis ine Voyage tekinoroji ndiyo imwe diki inogona kuvandudzwa.
Zvese izvi zvakataura kubva mukuremekedza 😉
Pindura Jerry Siegel
Ndatenda nechinyorwa chako, chakandibatsira zvakanyanya mukusarudza.
Zvinoenderana nemaoko aunayo, iyo Oasis inogona kutomboita diki kunyangwe nemhinduro inogadziriswa yakagadziriswa, asi zvinokumanikidza kuti ugare uchiverenga neruoko rumwe.
Pane mhinduro, tenga iyo Voyage SUV, uye iyo Oasis yekuverenga uri pamubhedha.
Ini ndinofanira kutenga imwe yezuva rekuzvarwa kubva kune rakaipisisa muverengi webepa, iwe ungakurudzira chii? Ndinofanira kutaridzika zvakanaka kwazvo
Kindle Oasis vs Kobo Aura H2O, kupokana kwecolossi?
New plugin inowedzera mavara kune kutaura kuCaliber